Xaflad wacdaro leh oo loogu wanqalay Gobolka Hawd oo maanta ka dhacay Balligubadle | Somaliland.Org
June 29, 2008	Balligubadle (Somaliland.org) – Xaflad ballaadhan oo loogu wanqalayey magacaabista cusub ee Hawd ayaa maanta lagu qabtay magaalada xarunta u ah gobolkaas ee Balligubadle.
Madaxweyne-ku-xigeenka,. Axmed Yuusuf Yaasiin oo munaasibadda loogu wanqalayey Gobolka Hawd, ayaa tilmaamay in booqashada waqtigan ee Balligubadle ay xambaarsan tahay siro ka xeeldheer dabbaaldegga gobolka cusub. Waxana uu yidhi, “Maanta waxa halka la isugu yimi xaflad qudha, waxaanad mooday in mujaahidiintii halkan ka hadlaysay in aanay fahmin sir ama nuxurka halkan [Gobolka Hawd] la isugu yimi, markaa arrinkayga waxaan u kala qaadayaa laba qaybood; qaybi waxa weeye, dabcan aniga oo ka wakiil ah Madaxweynaha, waxaan leeyahay hambalyo, guul, bash-bash iyo barwaaqo ayaan idiin rajaynaynaa.”
Waxa kale oo uu tilmaamay in booqashada Balligubadle ee xilligan ay sidoo kale ku duugan tahay sir culus oo sadaalinaysa ictiraafkii Somaliland oo kaabiga soo fadhiistay, isla markaana waxa uu xusay in toddoba sanno kadib mar la isugu iman doono deegaankaas, taas oo uu ka gaabsaday inuu fasilo ujeeddada kulankaas.
Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah UCID Eng. Faysal Cali-waraabe, ayaa hambalyo u diray dadweynaha Gobolka Hawd oo uu sheegay inay ku keeneen gobolkan karti iyo dadaal ay muujiyeen, waxaannu kula dardaarmay inay isku duubnaadaan, isla markaana si gaar ah uga hawlgalaan ilaalinta deegaanka iyo dhirta, maadaama ay huwan yihiin magaca Hawd.
Guddoomiye-ku-xigeenka koowaad ee xisbiga KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi, ayaa ka xogwarramay kaalinta weyn ee mar walba beesha Balligubadle kaga jirtay halgannadii loo soo maray dalka, taas oo uu tilmaamay inay soo taxnayd ilaa 1884-kii, markii waddamada reer Yurub qaybsanayeen dunida, waxaannu xusay inay tahay beel ku caan baxday u daacad noqoshada hirgelinta halgannada loogu hiilinayo dadka ummadda, isla markaana lagaga gilgilanayo wax kasta ummaddan ku ah xadgudub iyo quudhsi nololeed.
Guddoomiyaha ururkii SNM, isla markaana ah Madaxweyne-ku-xigeenkii u horreeyey ee Somaliland Md. Xasan Ciise Jaamac, ayaa sheegay inuu si weyn ugu faraxsan yahay ka qaybgalka munaasibadda loogu wan-qalayo gobolka cusub ee Hawd, waxaannu xusay in sida qudha ee dadka deegaankani ku horumareen gobolkani ay tahay iyagoo isku duubnaadaa meelna uga soo wada jeesta danahooda.
Wasiirka Duulista iyo Hawada Md. Cali Maxamed Warancade oo isna ka mid ahaa masuuliyiinta halkaa ka hadashay ayaa ka qaybgalka munaasibaddan ku tilmaamay mid qiimo weyn ugu fadhida, isla markaana uu ku faraxsan yahay.
“Waxaannu aaminsahay in Gobolka Hawd si gaar ah loo magacaabo markii la magacaabay kuwii kale, inay tahay astaan muujinaysa gaar ah oo uu istaalo dadka gobolkani, walaalayaal waxa hubaal ah in halkan maanta [shalay] aannu mucaarad iyo maxaafad isku raacsanahay ammaanta reer Balligubadle iyo taariikhda wanaagsan ee ay ku leeyihiin Somaliland,” ayuu yidhi Md. Cali Warancade, waxaannu isaga oo ka warramaya taariikhda deegaanka Balligubudle ku leeyahay halgankii dib-u-xoreynta dalka uu intaa ku daray; “Maalmihii la galayey dalka calankii u horreeyey ee SNM ka taagto Somaliland waxa uu ahaa kii Balligubadle, arrintaasina siday u dhacday ayaan idiinka warramaya.
Waxa ii warramay nin ka mid ahaa ciidammadii Siyaad Barre oo ku jiray weerarkii u dambeeyey ee ay ku qaado Balligubadle, waxaannu igu yidhi; “Maalintaanu galnay Balligubadle waxaannu soo qabanay baabuurkii Guddoomiyaha ururka SNM, waxaannu soo urursanay birihii ay ku taagnayd Idaacaddu iyo calankii oo meesha lagu yar ilaabay, ayaanu soo qaadanay.’ Wuxuu yidhi; ‘Si aannu guushaa ugu muujino in aannu baabi’inay SNM, ayaanu intaas oo isku rakiban soo qaadnay, dabadeena waxaannu ka hortaagnay Tiyaatarka Hargeysa si aannu bandhig ugu samayno.’ Wuxuu yidhi; ‘Waxa mucjiso noqotay shaw calankii aannu Balligubadle ka soo qaadnay, ayaanu ka taagnay Tiyaatarka horteediisa, dabadeedna 14 casho kadib ayaa iyaga oo sida daadka u socda ay halkii ugu soo galeen, annana aannu ka dhaqaajinay.’ Markaa calankii u horreeyey ee dalka lagu xoreeyey waxa uu ahaa kii Balligubadle.”
Wasiirka Caafimaadka iyo Shaqada Md. Cabdi Haybe, ayaa ka dalbaday hay’adaha dawladda inay xafiisyadooda shaqo ka furtaan gobolka cusub oo uu dhalasho ahaan ka soo jeedo, si uu u noqdo mid hirgala oo horumar yeesha. Wasiirka Caddaaladda Md. Axmed Cali Xasan Casoowe, oo isna halkaa ka hadlay, ayaa tilmaamay in guulaha lagu xasuusan karo Balligubadle ay ka mid tahay in ay ahayd meeshii u horreysay ku shireen SNM iyo beelaha ee aan iyagu markaa ku jirin ururka.
Maayarka Caasimadda Hargeysa Eng. Xuseen Maxamuud Jiciir oo isna munaasibadda hadal kooban ka jeediyey, ayaa hambalyo u diray dhammaanba dadweynaha ku dhaqan gobolka cusub ee Hawd, waxaannu ugu ballanqaaday in isagu bixinayo deeqdii u horreysay ee loo fidiyo.
“Deeqdani waxa weeye in aan u soo diyaariyo computer-dii ay ku shaqayn lahaayeen xafiisyada gobolka oo dhan oo gaadhay ilaa 12 mid, sidoo kale waxaannu diyaar u ahay qalabaynta xafiiska Guddoomiyaha Gobolka, aniga oo ku hadlaya magaca Maayarka Maareeyada Somaliland.”
Boqor Buur madow oo ka mid ahaa oday-dhaqmeedyadii ka hadlay munaasibadda, ayaa magacaabista gobolkan ku tilmaamay guul u soo hoyatay ummadda Somaliland oo dhan iyo gaar ahaana bulshada ku dhaqan deegaankaas.
Sidoo kale gebagebadii munaasibaddan shahaado sharafyo lagu guddoonsiiyey masuuliyiin la sheegay inay qayb weyn ka soo qaateen magacaabista gobolka iyo guud ahaan taariikhda Balligubadle, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen Madaxweynaha, ku-xigeenkiisa, Xasan Ciise Jaamac iyo xubno kale.
Munaasibaddaa kadib, waxa uu madaxweyne-ku-xigeenku dhagax-dhigay xaruntii ururka SNM ee magaalada Balligubadle.